WeChat: A Magical Payment System? | Through The Lens – China Report ASEAN
January 11, 2018 China Report ASEAN Through The Lens Leaveacomment
WeChat isapart of all Chinese people’s daily lives.
WeChat is an app created by Tencent,aChinese tech firm. It can be used on one’s smartphone as well as the computer.
Like other social media such as Facebook and Twitter, users can share their photos and their thoughts and comments on WeChat. Additionally, WeChat can be used asamessaging tool for sending messages, chatting, video calls, sending files and so on.
A vital part of the WeChat app is its mobile payment service. WeChat can be linked toabank account, and people can use the app to transfer sums both large and small. Payment is also possible via scanningaQR code — now commonplace at shops across China.
In China, sellers ranging from street vendors to major businesses accept WeChat pay.
The most popular payment systems in China are WeChat and Alipay. In some Chinese cities, people can pay their subway fare by using Alipay.
In China, when going out, there’s no need to bring cash. Bringing your smartphone is enough. The scale and convenience of China’s mobile payment systems are unprecedented.
WeChat was established in 2011 and now has over 900 million users worldwide. The app offersadiverse range of services, and even includesamapping tool that allows users to view congested areas and plan their trips accordingly.
Additionally, WeChat is referred to as an all-in-one app because one can use it to do almost anything, including the purchase of train and air tickets, booking hotel rooms, ordering food, hiring taxis andamultitude of other capabilities.
What about you? Have you ever tried WeChat?
တရုတ်အကြောင်းပြောရင် WeChat အကြောင်း ထည့်မပြောလို့ မပြီးပါဘူး။
တရုတ်နိုင်ငံသားတွေရဲ့ နေ့စဉ်လူမှုဘ၀မှာ WeChat က မပါမဖြစ်လို့တောင် ပြောလို့ရပါတယ်။
WeChat ဆိုတာ တရုတ်နိုင်ငံမှာတီထွင်ထားတဲ့ Application တစ်ခုဖြစ်ပြီး ကွန်ပျူတာနဲ့ရော ဖုန်းနဲ့ပါ ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်အောင် စီစဉ်ထားပါတယ်။
WeChat ကို Facebook တို့၊ Twitter တို့လို လူမှုကွန်ရက်အနေနဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ၊ စာတွေ မျှဝေမယ်ဆိုရင်လည်း ရသလို၊ Chat Box ကနေလည်း အပြန်အလှန်စကားတွေ ပြော၊ ဓာတ်ပုံတွေပို့ လို့ရပါတယ်။ ဖေ့စ်ဘွတ်မက်ဆင်ဂျာက လုပ်နိုင်တာတွေအကုန်လုံး WeChat မှာလည်း လုပ်နိုင်တဲ့ သဘောပါပဲ။
နောက်ထပ် ပိုပြီးသာသွားတဲ့အချက်က WeChat ရဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျ box ကနေ ငွေလွှဲလို့ရတာပါပဲ။ ကိုယ့်ရဲ့ ဘဏ်ကတ်ကို WeChat နဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး ဈေးဝယ်တဲ့အခါမှာလည်း ပိုက်ဆံမသုံးဘဲ WeChat ကနေ ဆိုင်က QR code ကို scan ဖတ်ပြီး ကျသင့်ငွေကို ရှင်းလို့ရပါတယ်။
ဒီလို WeChat နဲ့ဖြစ်ဖြစ် တခြား ငွေပေးချေတဲ့ စနစ်တစ်ခုခုနဲ့ဖြစ်ဖြစ် ငွေရှင်းတာကို တရုတ်မှာ ဆိုင်ကြီးတွေကစလို့ လမ်းဘေးဈေးသည်တွေအထိ လက်ခံကြပါတယ်။
တရုတ်မှာ WeChat နဲ့ Alipay ကတော့ နာမည်အကြီးဆုံး ငွေပေးချေတဲ့ စနစ်တွေပါပဲ။ တရုတ်က ပြည်နယ်တစ်ခုမှာ ရထားကိုတောင် Alipay နဲ့ စီးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကို တလောက ဖတ်လိုက်ရပါသေးတယ်။
တရုတ်မှာနေတဲ့အခါ အပြင်သွားချင်ရင် ငွေအများကြီး သယ်သွားစရာမလိုပါဘူး။ ဖုန်းတစ်လုံးပါရင် ကိစ္စအကုန်ပြီးပါတယ်။ ဒါကြောင့် ခါးပိုက်နှိုက်ခံရမှာလည်း စိုးရိမ်စရာမလိုတော့ပါဘူး။ ဒီလိုငွေပေးချေတဲ့စနစ်ကို တခြားဥရောပနိုင်ငံတွေမှာတောင် မလုပ်နိုင်ကြသေးပါဘူး။
WeChat က ၂၀၁၁ လောက်မှ စပေါ်တာပါ။ အခုဆိုရင် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှာ WeChat ကို သုံးတဲ့သူ သန်း ၉၀၀ ကျော်နေပါပြီ။
တရုတ်မှာနေပြီး WeChat သုံးမယ်ဆိုရင် ဘယ်နေရာမှာ လူဦးရေ ထူထပ်လဲဆိုတာကအစကြည့်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ခရီးစဉ်ကို အစီအစဉ်ပြောင်းနိုင်ပါတယ်။
နောက်ပြီး WeChat ကနေ ရထားလက်မှတ်၊ လေယာဉ်လက်မှတ် ဘွတ်ကင်လုပ်တာတွေ၊ ဟိုတယ်အခန်း ငှားတာတွေ၊ အစားအသောက်နဲ့ တခြားကုန်ပစ္စည်းမှာတာတွေ၊ တက္ကစီငှားတာတွေက အစ လုပ်နိုင်လို့ စွယ်စုံရ App လို့တောင် တင်စားကြပါတယ်။
စာဖတ်သူတွေရော WeChat သုံးဖူးကြလား။
Previous Post: Zaw Ye Aung: 10 Months in China | Living Here
Next Post: China-ASEAN Economic Relations in 2017 | China-ASEAN